Matte Black Bathroom ithawula Bar 9 intshi
Ikhaya / izesekeli / Izinto Zokugeza / Matte Black Bathroom ithawula Bar 9 intshi
Isiphetho esibucayi sivikela iMatte Black Bathroom Towel Bar 9 Inches kusuka ekugqolweni nasekugqwaleni endaweni emanzi ekhishini noma endlini yangasese futhi kuthuthukisa ukuqina.
IMATTE BLACK FINISH: Isiphetho esisheshayo ngokuphelele, sekhwalithi ephezulu ye-matte emnyama yakhelwe ukumelana nokuklwebheka kwansuku zonke, ukubola nokungcola.
IZINTO ZOKUQALA - Zakhiwe ngensimbi engagqwali yokudla engu-18/8 evimbela ukugqwala nokugqwala ekutholeni indawo yokugezela yakho ukuze ihlale isikhathi eside, imigoqo yethawula inikeza ukufinyelela okulula nokuboniswa kwamathawula nezindwangu zokugeza kubathengi bakho. Futhi, ukwakhiwa kwensimbi kuqinisekisa ukuthi uthola iminyaka eminingi yokusetshenziswa kuleli bha yethawula. Amabha wethawula ayindawo elula yokugcina amathawula akho agcina amathawula akho omile futhi efinyeleleka. Amabha wethawula eza ngobude obuhlukahlukene ukuxhumanisa nezidingo zakho made ngokwanele ukukunikeza ububanzi bamathawula alenga nezingubo ezigeziwe. Idizayinelwe imigqa ehlanzekile nokwakhiwa okuqinile, imigoqo yamathawula amnyama yamatte inikezela ngokusebenza kwansuku zonke ngesitayela. Umumo oyisikwele ohlukile nomgodi wokufihla ofihliwe wengeza izinto zesimanje zokuhlobisa ikamelo lakho, imiphetho ekhuphukayo ivikela umzimba wakho ekuklwebheni.
Ibha yethawula: ifanele amakhabethe okugezela, amatafula okugqoka, amathawula esandla
Ihange elibonakalayo + ∅4 * 35mm ngokuthepha isikulufa + ukhiye we-hex
SKU: 480109DB-9 Categories: Izinto Zokugeza, izesekeli Tags: indlu yokugezela, Black, yesimanje